शेयर लगानीकर्ताको त्रास
धितोपत्रबजारमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ तर सक्रिय लगानीकर्ता भने अभैm अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन । प्राथमिक निष्कासन भने धेरैका लागि ठूलो उत्सव वा दुर्लभ अवसर नै हुने गरेको छ । प्राथमिक निष्कासनमा गरिएको लगानीलाई धेरैले ‘परे पुरस्कार नपरे पैसा फिर्ता हुने खालको चिट्ठा’का रूपमा मात्र बुभ्mने गरेकोले यसमा भीड देखिएको हो ।
दोस्रो बजारमा बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता कमै छन् । उनीहरू हतपत नोक्सानीमा पर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र क्षेत्रका लगानीकर्ताको हितको संरक्षण, यस क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम आदि पक्षबारे सचेत पार्ने धितोपत्र बोर्डले काठमाडांैबाहिरका सर्वसाधारणसमेत लाभान्वित हुने गरी चेतनामूलक काम गर्ने गरेको छ । तर पनि पर्याप्त मात्रामा शेयरबजारमा लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् ।
शेयरबजारको विस्तारका लागि उपत्यकाबाहिर पनि ब्रोकरहरूलाई काम गर्न दिइयो । केही उत्साह देखिए पनि त्यो कायम रहन सकेन । शेयरबजारमा एक वर्षकै समयमावधिमा पनि धेरै सुधार भइसकेको छ तर शेयरबजार खुम्चने क्रम भने रोकिएको छैन । नयाँ क्रेता थपिएका छैनन्, लगानीकर्ता कहिले शेयर बेचेर बाहिर निस्कूँ भनेर सोचिरहेका छन् । उपयुक्त मूल्य नपाएकाले उनीहरू शेयर होल्ड गरिरहेको अवस्था छ । अहिले शेयर लगानीकर्ताले अर्बौं गुमाइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री फेरिने हल्लाले मात्र पनि बजार बढेको पाइन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहेसम्म शेयरबजार उकालो लाग्दैन भन्ने मनोविज्ञान बनिसकेको छ ।
शेयरबजारमा केही विज्ञ पनि छन् । ती पनि बजारको घटाइबाट आत्तिएका छन् । बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म शेयरबजार उकालो नलाग्ने सबैको आकलन छ । तर, बैंकहरूमा तरलताको अभाव घट्नुको साटो बढिरहेको छ । यस्तोमा शेयरबजारलाई झन् तल झनै नदिन र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न अर्थमन्त्रीले पनि केही सुधारात्मक कुराहरू गर्नुपर्ने हो । तर, किन उनी लगानीकर्ताको मागलाई वास्ता गरिरहेका छैनन् ? लगानीकर्ता आक्रोशित छन् ।